Uploaded by Thazin Moe
Typed by Kaungmyattun99( http://achittatkatho.
အဆုးံ ထိ ချစ်ပါမောင်
ရေး - ချမ်းမြေ့သာဇံမောင်မောင်နှံ
Typed by Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသလ
“ အာ…ဟာ….ဒါ ငါ ရေချိန် မကိုက်…..မကိုက်သေးဘူး…..မင်း…မင်း လဲ ထပ်ချကွာ
“ ငါ ….တော်ပြီ….ဒီအနေလောက်ပဲ ကောင်းတယ်….၊ မင်းလဲ ဒီဟာကုန်ရင် တော်တော့ကွာ….”
ရေချိန်မကိုက်သေးဘူး ဆိုသော ရဲမင်း တစ်ယောက် စကားက လေသံတွေ မဆက်မိတော့ပဲ ခေါင်းကလဲ
ရဲမင်းကို ကြည့်ရင်း ထွန်းလင်း စိတ်ပျက်မိသည်..။ ရဲမင်းနှင့် ထွန်းလင်းတို့က တစ်မြို့တည်းသား
ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ကြသည်..။ ဆယ်တန်းအောင်တော့ သူတို့နှစ်ယောက် ဇာတိ မုံရွာမြို့မှ
အတူထွက်လာခဲ့ကြသည်..။ ရန်ကုန်တွင် အဆောင်နေ၍ ရရာအလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ရင်း
နှစ်ယောက်စလုံး ဘွဲ့တစ်ခုစီ ရခဲ့ကြသည်..။
အဲဒီနောက် ရန်ကုန်မှာပင် ဆက်၍ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး စီးပွားရေးကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်..။
နောက်ပိုင်း ရဲမင်းက ကီလီတွင် ငါးဒိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ချိုမွန်ဆိုသော
မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည်..။ ထိုအချိန်တွင် ထွန်းလင်းက တက္ကစီကား ၃
ရဲမင်း အိမ်ထောင်ကျပြီး ၆ လမျှ အတူနေခဲ့ကြပြီး နောက်မှ ထွန်းလင်းက သူပိုင်ကားများကို ရောင်း၍
မုံရွာသို့ ပြန်သွားခဲ့ရာ မုံရွာတွင် အိမ်ထောင်ကျကာ ပဲနှင့် ထန်းလျက် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကွဲကွာသွားခဲ့သည်မှာ ၃ နှစ်နီးပါး ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်..။ ပြီးခဲ့သည့်လက ရဲမင်းတို့
လင်မယားထံမှ စာတစ်စောင် ရောက်လာခဲ့သည်..။ အတိုချုပ်ပြောရလျင်း ရဲမင်း ကျန်းမာရေး
မကောင်းသဖြင့် သူတို့ လုပ်ငန်းကို ခဏ လာရောက် ဦးစီး လုပ်ကိုင်ပေးရန် ဖြစ်သည် ..။
။ သူ့ဖာသာ လျှောက်သည်.....။ “ ကဲ….။ ယခု ထွန်းလင်း မုံရွာပြန်သွားပြီး သုံးနှစ်အကြာ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ ရဲမင်းတစ်ယောက် အရက်၏ ကျေးကျွန်တစ်ယောက် လုံးလုံးလျားလျား ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရတော့ ထွန်းလင်း အံ့သြမိသည် ...ငါ့ဖာသာ ….။ ရဲမင်းနှင့် အသက် ၈ နှစ်တောင် ကွာသည်.။ ရဲမင်းနှင့် ထွန်းလင်း တို့က သက်တူရွယ်တူဖြစ်ပြီး ခုဆို အသက် ၃၂ နှစ်တောင် ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည် .” .။ ကားပေါ်ရောက်တော့ ထွန်းလင်းက ယာဉ်မောင် နေရာ ဝင်ထိုင်၍ ဟိုင်းလတ်ကားလေး ကို မောင်းခဲ့သည်..။ အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းတွင် ထိုင်၍ စာအုပ်တွေ တစ်ထပ်ကြီးနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေသော ချိုမွန်၏ အစ်မ အထက်တန်းပြဆရာမ အပျိုကြီး မမရင် ကို တွေ့လိုက်ရသည် .။ ရဲမင်းတို့ နေတာက အလုံဆင်မင်း ဈေးအနီးတွင် ဖြစ်ပြီး ကမ်းနားလမ်းရှိ တောင်ထိပ်ပန်းပွင့် စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဆို သိပ်အလှမ်းမဝေး…။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ဟိုင်းလတ်ကားနက်ပြာရောင်လေးက အိမ်ရှေ့သို့ ထိုးရပ်လိုက်သည်.။ ထွန်းလင်းက ကားကို အိမ်နှင့်တွဲလျက် အဖီဆွဲထားသော ကားဂိုဒေါင်ထဲသို့ သွင်းလိုက်ပြီး ကားရုံတံခါး ပိတ်ကာ အိမ်ပေါ်သို့ တက်လာခဲ့သည်.ငါတွဲမယ်….” “ လာ….” “ မင်းကလည်း ကွာ….မလုပ်စမ်းပါနဲ့…...။ ကားရပ်လိုက်သည်နှင့် အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်မှ ပြေးဆင်းလာသူက ချိုမွန်ဖြစ်သည်.။ သူမ၏ ယောက်ျား ရဲမင်းကို တွဲ၍ အိမ်ပေါ်သို့ ဆွဲတင်သွားသည်.ရဲမင်း….ပြန်ကြရအောင်….။ ယခင် သူတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အတူနေစဉ်က တခါတရံမှသာ အရက်သောက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်......ထွန်းလင်း မုံရွာတွင် လုပ်နေသော လုပ်ငန်းက ထွန်းလင်း၏ ဇနီးကလည်း ကျွမ်းကျင်ပြီးဖြစ်သည့်အပြင် ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေသည့် ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေကလည်း ရှိနေသည့်အတွက် မုံရွာက သူ့လုပ်ငန်းကို မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ ထားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်သို့ ဆင်းလာခဲ့သည်.လျှောက်နိုင်ပါသေးတယ်….။ ရဲမင်းလုပ်နေသည့် ငါးဒိုင်လုပ်ငန်းဆိုတာက ယောက်ျားတစ်ယောက် ဦးစီးဦးဆောင် မရှိ၍ မဖြစ်…။ ချိုမွန်ကလည်း ခုမှ ၂၄ နှစ်သာ ရှိသေးသည်.။ “ ပြန်လာပြီလား….။ အမှန်တော့ ရဲမင်း မကျန်းမာသည် ဆိုခြင်းမှာ တခြားမဟုတ်…။ အ၇က်က ရဲမင်းကို နိုင်သွားပြီး အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်သည်.မောင်ထွန်းလင်း…….” လူက ခြေလှမ်းမမှန်ချင်ပေမယ့် သူများတွဲတာကိုတော့ ရဲမင်းက လက်သင့် မခံ....” ” အော်….အေး….
..။ ရဲမင်းလည်း အိပ်ပျော်သွားပြီထင်သည်..။ ကျောလည်သာသာလောက် ရှိသော ဆံနွယ်တွေကို ဦးခေါင်း၏ နောက်ဖက်အရင်းမှ စုစည်း၍ ဆံညှပ်ဖြင့် စုညှပ်ထားပြီး ဆံပင်များကို သူမ၏ ရှေ့ဖက်သို့ ပုခုံးပေါ်မှ ကျော်ကာ ဆွဲ၍ ချထားသည်.“ ဟုတ်ကဲ့………” ထွန်းလင်း နှုတ်ခမ်းတွန့်ရင်း မဖြေချင် ဖြေချင် ဖြေလိုက်သည်.။ သူ့ကို ကျောပေးရပ်နေသော ချိုမွန်၏ နောက်ပိုင်းအလှသည် ဇနီးသည်နှင့် တစ်လကျော်မျှ ကင်းကွာနေရကာ ယမကာ မှီဝဲထားသော ထွန်းလင်း၏ သွေးသားများကို တစ်မျိုးတစ်မည်ပင် သွက်လက်စွာ လှုပ်ရှားသွားစေသည်.။ ထွန်းလင်း ထမင်းစားခန်းသို့ လျှောက်လာရင်း တစ်အိမ်လုံးတွင် မည်သူ့ကိုမှ မတွေ့ရ ပဲ တိတ်ဆိတ်နေသည်.။ အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် မမရင် ကို မတွေ့ရတော့.။ ထွန်းလင်း ဆိုင်မှာ စားခဲ့လျင် ရပေမယ့် သူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆိုင်ထမင်း ဆိုင်ဟင်းများကိုသာ စားခဲ့ရသည် ဖြစ်၍ အိမ်ထမင်းဟင်းကို ထွန်းလင်း ပိုခုံမင်သည်မို့ ဆိုင်မှာ မစားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်.။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုတွေ့တိုင်း စကားမရှိ စကားရှာ ပြောတတ်သည့်အပြင် သူ့နာမယ်ရှေ့က မောင် ထည့်ပြီး ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်လို ပြောဆိုဆက်ဆံတာကို ထွန်းလင်း မကြိုက်ပေ…။ ထွန်းလင်း ကားသော့နှင့် ကားရုံသော့တို့ကို နံရံတွင် ချိတ်နေကျ အတိုင်း ချိတ်ထားခဲ့ပြီး သူ့အိပ်ခန်းရှိရာ အပေါ်ထပ်သို့ တက်လာခဲ့သည်..။ အမှန်တော့ မမရင် ဆိုသူ မရင်မွန်၏ အသက်က ၃၆ နှစ်လောက်သာ ရှိသေးကြောင်း သူသိထားသည်.။ ပြီးတော့ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ကာ အောက်ထပ်သို့ ရေချိုး ဆင်းခဲ့သည်.။ ဖွေး၍ နုနေသော လည်ပင်းဂုတ်သားလေးများသည် ဟိတုစ်စ သည်တစ်စ ကျ၍နေသော ဆံနွယ်စလေးများနှင့် မချင့်မရဲဖြစ်စေအောင်ပင် လှပလို့်နေသည်.။ ပြီးတော့ တစ်ဖက်သို့ ပြန်လှည့်သွားသည်....။ သူထမင်းစားခန်းထဲသို့ လှမ်းအဝင်လိုက်တွင် ထမင်းစားပွဲဘေး၌ ရပ်နေသော ချိုမွန်ကို သူတွေ့လိုက်ရသည်..။ သူမ အိပ်ခန်းထဲ ဝင်သွားပြီ ထင်သည်.။ သူ့ထက် ၄ နှစ်လောက်သာ ကြီးသည်...။ ပုခုံးစွန်းမှသည် အိအိဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်ကာ သွယ်ဆင်းကျသွားသည့် သူမ၏ ဝင်းစက်စက် ...။ ဝတ်ထားသော အဝါရောင် ဘလောက်စ် လက်ပြတ်အင်္ကျီလေး၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ထွက်ပေါ်နေသော ပုခုံးသားနုနုလေးနှစ်ဖက်က ဝင်းဝါကာ ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေသည်....။ ရဲမင်းကတော့ ညစာ မစားတာကြာပြီ.။ သူတို့ လင်မယား အိပ်ခန်းရှေ့မှ ဖြတ်၍ အလျှောက် အသံက တိတ်နေသည်..။ ရေချိုးပြီး အပေါ်ထပ်သို့ တက်ကာ အဝတ်အစားလဲပြီး ညစာ ထမင်းစားရန် အတွက် ထွန်းလင်း အောက်ထပ်သို့ ပြန်၍ ဆင်းလာခဲ့သည်...။ ထွန်းလင်းသည် ချိုမွန်၏ နောက်ဖက်နား အရောက်မှ ခြေအစုံကို ရပ်လိုက်သည်.။ ချိုမွန်က သူဝင်လာရာဖက်သို့ သမင်လည်ပြန် လှည့်ကြည့်ပြီး တစ်ချက် ပြုံးပြလိုက်သည်.။ သူ့အတွက် ထမင်းပွဲကတော့ စားပွဲပေါ်တွင် အဆင်သင့် ရှိနေမည်ကို သိပြီးသား ဖြစ်သည်.။ ပြီးတော့ သူမ၏ ကျောကို ငေးကြည့်နေမိသည်.....
။ သို့သော် သူမက မသိသလို ဟန်လုပ်နေသည်ကို ထွန်းလင်း သတိထားမိလိုက်ပြီး ဘာအဓိပ္ပါယ်ဆိုတာကိုပါ သူ သဘောပေါက်လိုက်သည်.။ ထွန်းလင်းက သူမ၏ ပခုံးသား အိအိဖောင်းဖောင်းလေးများကို သွေးတိုးစမ်း၍ အသာအယာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..နော်….” .။ သူမဆီမှ မွှေးပျံ့၍ လွင့်လာသော ရနံ့လေးက ထွန်းလင်း၏ ဘဝင်ကို ဆွဲလှုပ်လိုက်သည်.ထမင်း စားတော့မလား…..။ လူချင်း ထိလုမတတ် ဖြစ်သွားသည်.။ သိနေသည်သာ ဖြစ်ပါသည်....။ “ ကိုထွန်းလင်း….။ ချိုမွန်၏ နုညက်ဝင်းဝါနေသော ရင်ညွန့်သားလေးများပေါ်မှ တွန့်တွန့်ခွေခွေလေး ဖြစ်နေသည့် ဆံနွယ်လေးများက ဘယ်ညာ ယိမ်းထိုး လှုပ်ရှားသွားကြသည်.။ မူလက ထိလုထိခင် ဖြစ်နေသော သူမ၏ တင်သားလုံးလုံးကြီးများက ထွန်းလင်း၏ ပေါင်ရင်းခွဆုံကို ဖိကပ်မိသွားသည်..ထမင်း စားတော့လေ…..။ ထွာဆိုင်သာသာမျှသာ ရှိသော သူမ၏ ခါးသေးသေးလေးသည် နွဲ့နှောင်းနေပြီး အစိမ်းနုရောင် ထမီပြောင်လေးအောက်မှ ဖောင်းတင်း၍ နေသော သူမ၏ တင်သားကြီးများမှာ လုံးတစ်ကားစွင့်လွန်းလှသည်..။ ချိုမွန်က ခါးကို ပြန်ဆန့်မတ်လိုက်ပြီး လက်ထဲမှ ထမင်းစားပွဲ အုပ်ဆောင်းကို ဘေးမှ ကုလားထိုင်ပေါ် တင်လိုက်သဖြင့် ချိုမွန်၏ တင်ပါးဆုံကြီးများက ကင်းကွာသွားပေးမယ့် ထွန်းလင်း၏ ခါးက ကော့၍ လိုက်သွားသဖြင့် စောစောကလိုပင် ဖိကပ်လျက်သား အနေအထားပင် ပြန်ဖြစ်နေသည် .။ မာတင်းနေသော အရာကြီး၏ ထိပ်က အိစက်နေသော တင်သားအိအိကြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တိုးကပ်မိသွားသည်.။ ထွန်းလင်း ရှေ့သို့တိုး၍ ချိုမွန်၏ နောက်ဖက်သို့ တိုးကပ်လိုက်သည် .။ ထွန်းလင်း၏ နှာခေါင်းဝမှ ပြင်းထန်စွာထွက်လာသော လေပူများက ချိုမွန်၏ ဂုတ်ပိုးသားနုနုလေးကို နွေးခနဲ နွေးခနဲ လာ၍ တိုးတိုက်မိသွားသည်.လက်မောင်းသားလေးများပေါ်တွင် လိမ်းကျံထားသော သနပ်ခါး အစင်းကြောင်းလေးတွေမှာ တဝက်တပျက် ပေါ်လွင်နေသည်.။ ထွန်းလင်း ချိုမွန်၏ နောက်ဖက်ဆီသို့ ပို၍ တိုးကပ်လိုက်သည်...။ ထွန်းလင်း ခပ်မြှင်းမြှင်းလေး သက်ပြင်း ချလိုက်သည်....” “ အင်း……” လေသံမျှသာဖြင့် ပြောလိုက်ပြီး ချိုမွန်သည် သူမ၏ ခါးလေးကို ညွှတ်၍ ရှေ့သို့ ကုန်းကာ စားပွဲပေါ်ရှိ ထမင်းအုပ်ဆောင်းလေးကို လှမ်းဆွဲဖယ်၍ ဖွင့်လိုက်သည်.။ ပြီးတော့ သူ၏ ပေါင်ကြားမှ သံချောင်းကြီးလို မာတင်းတောင်မတ်နေပြီ ဖြစ်သော လီးတန်ကြီးက ပုဆိုးထဲမှ ပင် ချိုမွန်၏ တင်ပါးသားကြီးများကို ထိုးထောက်ဖိကပ်မိနေသည်..။ နောက်ဖက်မှ သူရပ်ကြည့်နေသည်ကို ချိုမွန်သည် မသိမဟုတ်..။ “ …ကိုထွန်းလင်း…....။ ပြူတင်းပေါက်ဆီမှ တိုးဝင်လာသော လေနုအေးလေးက ထမင်းစားခန်းထဲသို့ ဖြတ်သန်း ဝင်ရောက်လာသည်...
။ ထွန်းလင်း၏ ရင်ခွင်ထဲမှ လွတ်မြောက်သွားသည်နှင့် အပျိုပေါက်လေးနှယ် အပြေးလေးတစ်ပိုင်းနှင့် ထွက်သွားသော ချိုမွန်၏ နောက်ဖက်ဆီမှ တုန်ခါ လှုပ်ရှားသွားသော တင်သားဆိုင်ကြီးများကို လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်း ထွန်းလင်းတစ်ယောက် ထမင်းစားပွဲ ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ ထိုင်ချလိုက်ရပါတော့သည်..။ ချိုမွန်က ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားပေးလိုက်သည်.။ ရဲမင်း မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီး ချိုမွန်ဘက်သို့ စောင်းကာ သူမကို ဖက်လိုက်သည်..။ ခုချိန်ထိ အိပ်မပျော်နိုင်သေးသူ တစ်ယောက်ကတော့ ချိုမွန်ပင် ဖြစ်ပါသည်..။ ခုံးမောက်နေသော စောက်ဖုတ်အုံက ရဲမင်း၏ လက်ဖဝါးတစ်ခုလုံး အပြည့်ဖြစ်သည်.။ အမွှေးပါးပါးလေးဖြင့် ဖောင်းထနေသော စောက်ဖုတ်အုံကြီးကို ပွတ်ရင်းညှစ်ရင်း ရဲမင်း ချိုမွန်၏ .” တုန်လှုပ်စွာ ရေရွတ်လိုက်ရင်းက ချိုမွန်သည် သူမ၏ ကိုယလ်ုံးလေးကို လူးလွန့်၍ တိုးထွက်လိုက်တော့ ထွန်းလင်း က သူမကို အသာပင် လွှတ်ပေးလိုက်မိသည်.။ ရဲမင်းက ချိုမွန်၏ ကိုယလ်ုံးလေးကို ဖက်လိုက်ရုံမက မျက်နှာလေးကိုပါ နမ်းလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ချိုမွန်၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ လှမ်းလိုက်သည် ..” သူမဘေးနားတွင် အိပ်ပျော်နေသော လင်ဖြစ်သူ ရဲမင်းက လူးလှိမ့်လိုက်သဖြင့် ချိုမွန်က ရဲမင်းဘက်သို့ ငဲ့စောင်း၍ ကြည့်လိုက်သည်.။ “ အို….တိုးတိုးလေး အသံကို ထိန်းပြီး ပြောပေမယ့် အသံလေးက တုန်ခါနေသည် ကို သတိထားမိလိုက်သည် .....။ ထမီက ခါးတွင် စည်း၍ ဝတ်ထားသဖြင့် လက်က ဗြုံးခနဲ သွင်း၍ မရသဖြင့် ချိုမွန်က သူမ၏ ခါးမှ ထမီကို ဖြည်ပေးလိုက်တော့မှ လက်က လျှောခနဲ ဝင်သွားသည်.။ ဒီအချိန် ရဲမင်း တစ်ရေးနိုးနေကျ ဖြစ်သည်.။ သူ့ကိုယ်သူ သတိမထားလိုက်မိခင်မှာပင် ထွန်းလင်းသည် ချိုမွန်၏ ပါးပြင် မို့မို့လေးကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းလိုက်လေသည်...။ ထိုသို့ ပြောရင်း ချိုမွန်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ဖြတ်ခနဲ နောက်သို့လှည့်လိုကသ်ဖြင့် ထွန်းလင်း၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ သူမမှာ လုံးလုံးလျားလျား ရောက်ရှိသွားရလေတော့သည်...။ -----------------------x---------------------x-----------------------အချိန်က ည ၁၂ နာရီ ကျော်ပြီ ဖြစ်သည်..။ ထမီပေါ်မှ ကိုင်ရတာ အားမရ၍ ထမီကြားသို့ ရဲမင်းက လက်ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။ “ အင်း…..။ တစ်အိမ်သားလုံး အိပ်မောကျနေကြပြီ...။ ချိုမွန်သည် အိပ်ယာထက်တွင် ပက်လက်လေး ငြိမ်နေပြီး မျက်လုံးလေး နှစ်လုံးက မှိုင်းဝေလျက် ဇာခြင်ထောင်အမိုးကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ကြည့်နေပြီး သူမ၏ လက်ချောင်းလေးများကို တဖျောက်ဖျောက် ချိုးနေလေသည် ..
.။ မောလွန်း၍ လည်း သူ့ပါးစပ်ကို ဟကာ တဟင်းဟင်း အသက်ရှူနေရသည်.။ အသာအားယူ၍ ကိုယ်ကို မတ်လိုက်သည်.ဟင်…” ရဲမင်း ဘက်လှည့်ကြည့်ပြီး မျက်လုံး အဝိုင်းသားလေးနှင့် မေးရှာသည်.။ ...” ပြန်ဖြေပြီး ရဲမင်းက အိပ်ယာပေါ်မှ ကြုံး၍ အထ တစ်ချက်ယိုင်သွားသည်..။ မျက်တောင်လေးများ ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် လုပ်၍ အရသာခံနေသည်.။ ချိုမွန် မျက်လုံးနှစ်လုံးကို မှိတ်၍ အချလိုက် ရဲမင်းက သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး ဖက်လိုက်သည်...လုပ်နိုင်သေးလို့လား….။ စောက်ပတ်ဝတွင် လီးတေ့မိသည်နှင့် ဖိသွင်းလိုက်သည်.။ ပြီးတော့ သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်၍ ချိုမွန်၏ ခြေရင်းဘက်သို့ သူ့ကိုယက်ို အရွှေ့ ချိုမွန်က သူမထမီကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဒူးနှစ်လုံးကို ထောင်ကာ ပေါင်တန်ကြီးများကို ဖြဲကားပေးလိုက်သည် .။ “ အင်း…...။ တဖြည်းဖြည်း ချိုမွန် အရသာ တွေ့လာပြီး ကာမရှိန် တက်လာသည်..။ ရဲမင်း မကိုင်မီထဲက ထွက်နေသော အရည်လေးများက ရဲမင်းလက်ကို ရွှဲနေပြီဖြစ်သည် .အင့် ဟင့်…...။ ချိုမွန် ဘာပဲ ပြောပြော ရဲမင်းက ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပဲ အတင်း နင်း၍ ဆောင့်လိုးနေသည် .ဖွတ်…ပလွတ်.။ “ ကိုမင်း…..။ စောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းရနိုင်ရုံလောက်သာ လီးက မာသည်.။ “ ကိုမင်း…ဖြေးဖြေး ပဲ လုပ်နော်…..ဖြေးဖြေးချင်းပဲ လုပ်ပါဆို…..မျက်နှာလေးကို ကြည့်သည်...” ရဲမင်း၏ ဆောင့်ချက်ကြောင့် ချိုမွန်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ သိမ့်သိမ့်တုန်နေလေသည် ..ပြစ်…ဖွတ်……” “ ဟင့်…အင့် အင့်….” “ အင်း…ပါ……” အင်းပါလို့ နှုတ်က ပြောလိုက်ပေမယ့် ရဲမင်းက လိုးပြီဆိုကထဲက တအားဆောင့်၍ ခပ်သွက်သွက်ကြီး လိုးတော့သည်..။ ပြီးတော ဖင်ကိုကြွပြီး ဆောင့်လိုးရန် လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်.။ ရဲမင်း ပေါင်နှစ်လုံးအကြား ဒူးထောက်၍ သူ့လီးကို ကိုင်ကာ စောက်ပတ်ဝသို့ တေ့ကပ်လိုက်သည် .။ လီးက မာသင့်သလောက် မာသော်လည်း ဟိုအရင်တုန်းကလိုတော့ သန်မာတောင့်တင်းမှုမျိုး မရှိတော့ပေ.ကိုမင်း….။ “ ပလွတ်…....
.။ “ အင်း…...........။ ပြီးတော့ ငြိမ်၍ ကျသွားတော့သည်..စွပ်…ဖွတ်……” ရဲမင်း၏ လီးကြီးက တစ်ချောင်းလုံး ကျင်တက်လာပြီး ရဲမင်း၏ ဆောင့်ချက်များ အားပျော့၍ လာသည်.။ ပြီးတော့ သူမ၏ မျက်လုံးအိမ်မှ မျက်ရည်များကို လက်ဖမိုးဖြင့် သုတ်ပြီး ခြင်ထောင်ကိုဖွင့်၍ ကုတင်အောက် ဆင်းလိုက်သည်.။ ချိုမွန် ခရင်ပတ်ဗူးကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး သူမ၏ မျက်နှာကို အနည်းငယ် ခြယ်မှုန်းလိုက်သည်.မွန် နဲနဲ လိုသေးတယ်… အင်း…အင်း……....ထိန်းထားပါအုံး….” ရဲမင်း၏ လီးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲတွင် တဆတ်ဆတ် တငေါ့ငေါ့ ဖြစ်ကာ သုတ်ရေများကို ပန်း၍ ထုတ်နေချေပြီ…။ ချိုမွန်၏ မှိတ်ထားသော မျက်လုံးလေးများ ထောင့်မှ မျက်ရည်စလေးများ စိမ့်၍ စီးကျလာလေသည်.။ ပြီးတော့ သူမ ထမီလေးကို ထိုက်လျက်က စွတ်ကာဝတ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သလို ခါးတွင် ပတ်စီးကာ အိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲချလိုကသ်ည်.။ သူမ၏ မျက်လုံးအိမ်ထဲတွင် မျက်ရည်လေးတွေ ရစ်ဝိုင်းနေသည်.ပြစ်….။ ပြီးတော့ မှန်တင်ခုံရှေ့တွင် ထိုင်ကာ ခေါင်းဖီးနေမိသည်....။ ဆက်ပြီး နားစွင့်လိုက်တော့ ခြေသံက အိမ်နောက်ဖေးဖက်သို့ လျှောက်သွားသံကို သတိထားမိလိုက်သည်.။ သို့ရာတွင် သူမမှာ ခုမှ အရှိန်ကောင်းနေတုန်း ပင် ဖြစ်ကာ အရသာတွေ တက်နေဆဲ ဖြစ်သည်....။ ထို့နောက် နောက်ဖက် အိမ်သာထဲ ဝင်လိုက်ပြီး ရေဆေးကာ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး ထမီလဲလိုက်သည်.။ ချိုမွန်မှာသာ မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် ထထိုင်လိုက်ပြီး စောစောက ချွတ်ထားသော ပုဆိုးကိုယူကာ ရဲမင်း၏ အောက်ပိုင်းကို ဖုံးပေးလိုက်သည်.“ ဗြစ်….။ မကြာမီမှာပင် သူမ၏ ကျောဖက်မှ ရဲမင်းတစ်ယောက် တရှူးရှူးဖြင့် ပြန်လည် အိပ်မောကျသွားလေတော့သည်.ပလွတ်…..ထိန်း….။ အတန်ကြာတော့မှ ချိုမွန်သည် လှဲနေရာမှ လေးလေးပင်ပင်နဲ့ ထ၍ ထိုင်လိုက်သည်.။ သုတ်ရည်များ ပန်းထုတ်ပြီးသွားသော လီးကြီးက ချိုမွန်၏ စောက်ခေါင်းထဲတွင် ပင် တစတစ သေးသွားကာ နောက်ဆုံး ကျွတ်ထွက်သွားရတော့သည် .။ ချိုမွန်တစ်ယောက် သိလိုက်ပါပြီ…။ ရဲမင်း တစ်ယောက် ပြီးတော့မည်.။ ထိုအခိုက်မှာပင် အပေါ်ထပ်မှ ဆင်းလာသော ခြေသံကြားလိုက်ရသဖြင့် ချိုမွန် နားစွင့်လိုက်ရင်း သူမ၏ မျက်လုံးလေးများက တောက်ပြောင်လာသည်..။ ပြီးမှ မှန်တင်ခုံရှေ့မှ ထကာ ရဲမင်းထံ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တရှူးရှူးနဲ့ .။ ရဲမင်းက ချိုမွန်၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ဘေးသို့ လှိမ့်ချလိုက်သည်.ဖတ်…..။ ရဲမင်း တဟဲဟဲနှင့် မောဟိုက်ကာနေပြီ.။ ရဲမင်းကို ကျောပေး၍ စောင်းအိပ်လိုက်ပြီး မျက်လုံးလေးများကို မှိတ်လိုက်သည်.ဟင်း…ကိုမင်း….ဖွတ်….။ ခေါင်းငိုက်စိုက် ကျသွားသော ရဲမင်းမှာ ချိုမွန်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်ပြီး ဟောဟဲ ဆိုကက်ာ အမောဖောက်နေလေတော့သည်.
.။ ထွန်းလင်းက သူ၏ လက်တစ်ဖက်ကို နှစ်ကိုယ်ကြားသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး လက်ဖဝါးကို လှန်၍ သူမ၏ ပေါင်ကြားကို ထိုးသွင်းလိုက်ပြန်ရာ ချိုမွန်က သူမ၏ ပေါင်တန်းကြီးနှစ်လုံးကို ကွ၍ ဟပေးလိုက်သည် .။ ချိုမွန် ခါးလေးတွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားရသည်...။ စောစောက ရဲမင်း လိုးထားခဲ့စဉ်က ပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်နေရသော ချိုမွန်မှာ ကာမစိတ်တွေ ဟုန်းခနဲ ပြန်လည် နိုးကြွလာချေပြီ…။ ချိုမွန်သည် သူမ၏ ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့ကော့ပြီး ထွန်းလင်း၏ လက်ဆီသို့ စောက်ဖုတ်ကို ကပ်၍ကပ်၍ ပေးနေသည်.။ ထမီပေါ်မှ ကိုင်ရသည်မှာပင် နူးညံ့၍ ထွေးအိမို့ဖောင်းလွန်းလှသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ထွန်းလင်း၏ လက်များက ဖွဖွလေးဆုပ်လိုက် နယ်လကိုညှစ်လိုက်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ကလိပေးနေသည် ..။ ချိုမွန်တစ်ယောက် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းထန်လာရုံမက အသားတွေပါ တဆတ်ဆတ် တုန်ကာ ရပ်နေသော ခြေထောက်များက မခိုင်ချင်တော့ပေ...။ ချိုမွန် အသက်ပြင်းပြင်း တစ်ချက် ရှူလိုက်ပြီး ထွန်းလင်းမျက်နှာကို တစ်ချက် စိန်းစိန်းကြည့်ကာ အံကို ကြိတ်လိုကသ်ည်.။ ထွန်းလင်းနှင့် ချိုမွန်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြသည်.။ နောက်ဖေးရောက်တော့ အိမ်သာထဲမှ ထွက်လာသော ထွန်းလင်းကို တွေ့လိုက်သည်.။ ပြီးတော့ ငုံ့ ကြည့်လိုက်ရင်း သူမ ရင်ထဲ သိမ့်ခနဲ ဖြစ်သွားရသည် ...။ နောက်ဖေးဖက်သို့ ခပ်သွက်သွက်လေး လျှောက်လာသည်.။ သူ၏ လက်က စောက်ဖုတ်ကြီးကို ထမီပေါ်မှပင် အုပ်ကိုင်လိုက်သည်......။ ထွန်းလင်းကလည်း သူမကို ဆီးကြို၍ ဖက်လိုက်ပြီး ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို ဖိပြီး နမ်းလိုက်ရာ မှ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းအစုံကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်.။ ထမီပေါ်မှပင် သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အောက်မှ အထက်သို့ ပင့်၍ လှန်ပြီး ပွတ်ပေးလိုက်သည်.။ သူမ၏ ခါးကို သိုင်းဖက်ထားသော ထွန်းလင်း၏ လက်က အောက်သို့ လျှောကျသွားပြီး သူမ၏ လုံးတစ်နေသော ဖင်သားကြီးများကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်ပေးသည်.။ စောက်ပတ်မှ စိမ့်ထွက်လာနေသော စောက်ရည်တို့ကလည်း ထမီလေးကို ဖောက်ကာ ထွန်းလင်း၏ လက်ဖဝါးကို စိုရွှဲလာစေသည်.။ ထွန်းလင်းက သူမ၏ အောက်ပိုင်းကို ငုံ့အကြည့် တုန်ရင်နေသော ချိုမွန်၏ လက်တစ်ဖက်က ထွန်းလင်း၏ ပုဆိုးကိုပါ ဆွဲ၍ ချွတ်ပစ်လိုက်သည်...။ ဆတ်ခနဲ တုန်သွားသော ချိုမွန်က နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ပြွတ်ခနဲ ဆွဲခွာလိုက်ပြီး ထွန်းလင်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို ကြုံးဖက်ထားလိုက်ပြီး မျက်လုံးလေးများ စုံမှိတ်ကာ သူမ မျက်နှာလေးကို ရင်အုံကြီးထက်သို့ အပ်ထားလိုက်သည်..။ အိပ်ခန်းတံခါးကို ဖွင့်၍ ချိုမွန် ထွက်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမ၏ ခါးမှ ထမီကို ချွတ်ချလိက်ုတော့သည် ...။ ချိုမွန်ကလည်း ပြန်လည် စုပ်နမ်းသည်.။ .။ ချိုမွန်၏ ကိုယ်လုံးလေး တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်သွားသောကြောင့် ထွန်းလင်း၏ ကျန်သော လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ပုခုံးတစ်ဖက်ကို ညင်သာစွာ ကိုင်လိုက်သည်.အိပ်ပျော်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ချိုမွန်က အံတစ်ချက်ကြိတ်လိုက်ကာ ထွန်းလင်းကို အငမ်းမရ ပြေးဖက်မိသည်.။ ချိုမွန်၏ အသက်ရှူသံတွေက ပြင်းထန်လာသည်....။ သူမ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ပွတ်ပေးနေရင်းက ထွန်းလင်းသည် သူမ၏ လည်တိုင်လေးနှင့် မေးဖျားလေးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် စုပ်စုပ်ပြီး နမ်းပေးသည်..
.အားရလိုက်တာ………အင်း…အင်း….ကြီးလိုက်တဲ့ဟာကြီး….။ ထွန်းလင်းကလည်း သူမ ခါးမှ ကိုင်၍ ထိန်းမြှောက်ကာ ချီပွေ့လိုက်သည်.။ ချိုမွန်မှာ သူမစိတ်ကို သူမ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ပါ.ဟင်း.ဒုတ်………” “ အ…အ…အင်း……......။ လီးကြီး ဝင်သွားတာကို ငုံ့ကြည့်နေသော ချိုမွန်က လီးကြီး တဆုံးဝင်ရန် လက်နှစ်လုံးလောက် အလိုတွင်တော့ သူမ၏ ဖင်ကြီးကို အားရပါးရ ကော့ကာ ဖိဆောင့် သွင်းချလိုက်သည်..ကွယ်….။ သူမ ထွန်းလင်း၏ လည်ပင်းကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သိုင်းဖက်ကာ ယီးလေးခိုလိုက်ပြီး သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ထွန်းလင်း၏ ခါးသို့ လှမ်း၍ ချိတ်ကာ ခါးထစ်ခွင် တက်လိုက်သည်.ယောက်ျား ပီသလိုက်တာ...ဗြစ်……ဗြစ်…….။ ထိုသို့လုပ်ရင်းမှာ အောက်မှ ဂွေးဥကြီးများကိုပါ လက်ဖဝါးလေးပေါ် အသာမတင်သလို လုပ်နေရာ…သူမ စောက်ခေါင်းထဲမှ တစစ်စစ် ခံစားလာရကာ စောက်ရည်တွေက တစိမ့်စိမ့် ယိုစီး စိုရွှဲကျလာတော့သည်...။ .အစ်ကိုရယ်….အီး…….....။ “ ဗြစ်….။ ပြီးတော့ လက်ချောင်းထိပ်လေးဖြင့် လီးဒစ်ကြီးထိပ်ကို ညင်သာစွာ ပွတ်သပ်ကြည့်နေသည်..။ ချိုမွန်က ခိုထားသော သူမ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်၍ ဖင်ကြီးကို အောက်သို့နှိမ့်ချလိုက်ပြီး ကော့ထောင်တက်နေသော လီးထိပ်ကြီးနှင့် သူမ စောက်ပတ်ဝ တေ့မိအောင် ချိန်ဆထိန်းညှိလိုက်ပြီး ဖင်သားကြီးကို ရှေ့သို့ ဖိသွင်းယူလိုက်တော့သည်.သူများ ..။ “ အိုး…အစ်ကိုရယ်….ဇွတ်….“ အို…..” သူမ မအောင့်အီးနိုင်တော့ပဲ ပါးစပ်မှပင် ထုတ်ဖော် မြည်တမ်းလိုက်မိသည်..” တုန်ရင်ခြောက်ကပ်စွာ ပြောလိုက်ပြီး သူမ၏ လက်ဖဝါးလေးက ထွန်းလင်း၏ မာတင်း တောင်မတ်နေသော လီးချောင်းကြီးကို လှမ်း၍ အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်.။ ပြီးတော့ သူမ စောက်ပတ်ဝနှင့် လီးအရင်းကို ဖိကပ်ပြီး တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် နှဲ့ကာ ဖိပွတ်ကြိတ်သည် ..။ စောက်ပတ်အတွင်းသားလေးတွေကို ဖြေးဖြေးချင်းပွတ်တိုက်ပြီး ဝင်သွားတာကိုက အားရပါးရ ရှိလွန်းလှသည်.။ “ ဗြစ်…ဖွတ်….” စောက်ရည်များဖြင့် စိုနစ်နေသော စောက်ခေါင်းထဲသို့ စီးခနဲ ဝင်သွားသော လီးကြီးက သံချောင်းကြီးအလား မာကျောတောင့်သန် လွန်းလှသည်.” မျက်တောင်လေးများ စင်းကျသွားရပြီး ချိုမွန့် မျက်နှာလေး မော့တက်သွားသည်..
.ဖွတ်.” ချိုမွန် မေးဖျားလေးမော့၍ မော့၍ တက်တက်သွားကာ အားရပါးရကြီးပင် ပြီးသွားတော့သည်.ဖွတ်…ဖတ်….။ “ အိုး……အိ….“ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကျလာနေသော စောက်ရည်တွေက ထွန်းလင်း၏ လမွေးအုံးတစ်ခုလုံး ရွှဲနစ်၍ သွားရသည်..ကို….အင့်.ဆောင့်ပေး…..အိ...ပင့်ဆောင့်ပေးစမ်းပါ…..ဟင်းဟင်း….ကို……အင့်…...ကို ရဲ့……အင်း…အင်…အ……” သူမ ပြီးသွားပေမယ့် ထွန်းလင်းက မပြီးသေး၍ ဆက်ကာ ဆောင့်နေသည် .အိ…အီး…..” ချိုမွန့် ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ပြီး လီးကို ဆွဲထုတ်၍ ပင့်အဆောင့် ချိုမွန်ကလည်း သူမကိုယ်ကို အနည်းငယ် ဖော့လိုက်ကာ အောက်မှ အပင့်နှင့် အံကိုက် ဖင်ဆုံကြီးကို ဆတ်ခနဲ ဖိဆောင့်ချသည် ..အ………..အား..” ဆောင့်ချက်တွေက သွက်၍ ပြင်းထန်လာသည်.အင်း…….အ…အင့်…အင့်….။ “ ဖွတ်….ဇွတ်...ပလွတ်…..အား.ကိုရယ်…..ဒုတ်…..ဟင့်……….အိ…….အင်း… ထိလိုက်တာ….သူများ ပြီး….ဟင်း…ကို…ကို…...စွတ်…..ဖွတ်….သူများ စိတ်တွေ…တအားဖြစ်နေပြီ……ဟင့်..ပြီ...ဖွတ်…..ု .လုပ်.။ “ ဗြစ်…..ကိုရဲ့…..ကောင်း….ကောင်း…….အို….အထဲမှာ…နင့်နေတာပဲ…ကိုဟာကြီးက…တအား ဆောင့်ပေးပါ…အ… အ…...ဟင်း..အင်း…..အ…” ” ကို……..အင်း……” လီးအသွင်းအထုတ် စောက်စေ့လေးကို အထဲသို့ ခေါက်ဝင်သွားလိုက် အပြင်သို့ လန်ထွက်လာလိုက်ဖြင့် ချိုမွန်တစ်ယောက် အသဲခိုက်အောင်ပင် ဖြစ်နေသည်.အာ့.စွတ်….ကောင်းလှချည်လား….။ “ ဗြစ်…..။ “ အိ.။ .အား…ပြီး…ပြီး….“ အင်း….ဖွတ်..ကိုရယ်….။ ဒီလို အရသာမျိုး မခံစားရတာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်လေတော့ ချိုမွန့်စောက်ပတ်ကြီးထဲမှ စောက်ရည်တွေက အတောမသတ်နိုင်အောင်ပင် စိမ့်ထွက်ယိုစီးကျနေသည်မှာ ဒလကြမ်းပင် ဖြစ်သည်.။ ပုံစံအနေအထား အရ စိတ်ထင်တိုင်း ဆောင့်၍ မရသော ပုံစံမို့ လီးကြီး၏ မာကျောတောင့်တင်းမှုကပင် ချိုမွန်ကို ကျေနပ်အားရစေလှသည် .ဒုတ်…….
။ ========================================== ဒီနေ့ ငါးဒိုင်တွင် အလုပ်ကလည်း ပါးသည်.။ ကားမောင်းလာပြီး လမ်းသို့ရောက်မှ အိမ်ပြန်ပြီး တစ်ရေးလောက် အိပ်ရင် ကောင်းမည်ဟု တွေးပြီး ကားကို အိမ်ရှိရာသို့ ဦးတည်၍ မောင်းခဲ့သည်.။ ကြားလိုက်ရသော အသံက မမရင်၏ အိပ်ခန်းထဲမှ မမရင် ချောင်းဆိုးသံပင် ဖြစ်လေသည်..။ ဒီတော့မှ ထွန်းလင်းမှာ ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ ကျောင်းပိတ်ရက်မှန်း သတိထားမိလိုက်သည် .။ အိမ်သော့နှင့် ကားသော့က တွဲလျက်သားရှိနေ၍လည်း အိမ်ပြန်ရန် အတွေးကို ထွန်းလင်း တွေးမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်..” ဟု ပြော၍ ဟိုင်းလပ် ကားလေးကို ယူကာ ထွက်ခဲ့လေသည်.။ မမရင်က အိမ်ရှေ့ သံတံခါးကို သော့ဖွင့်ပြီး သော့ခလောက်ကို ပြန်ချိတ်ကာ အိမ်ထဲသို့ ပြန်ဝင်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်.....။ ထွန်းလင်း ...။ ပုဆိုး လဲဝတ်ရင်း သူ့အောက်ပိုင်းကို သူ့ဖာသာငုံ့ကြည့်မိသည် .....“ အဟမ်း….။ မမရင် အခန်းထဲမှ ထွက်မလာခင် အပေါ်ထပ်သို့ အရောက်သွားရန် ရပ်နေရာမှ လှစ်ခနဲပင် ထွက်ခဲ့လိုက်ရသည်..။ ဒီညအဖို့ ချိုမွန်တစ်ယောက်မှာတော့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စွာ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပေမယ့် ဆတ်တငံ့ငံ့ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရသူ ထွန်းလင်းမှာ ဘယ်လိုမှ အိပ်မပျော်နိုင်ပဲ မျက်လုံးအကြောင်သားဖြင့် အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲနေရတော့သည်.။ အာသာငမ်းငမ်း ဖြစ်နေသော လီးတန်ကြီးက မာတောင်နေသည်......။ ထွန်းလင်း အိမ်ပေါ်ထပ်သို့ တောက်လျှောက်တက်လာခဲ့ပြီး သူ၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ေ၇ာက်တော့ ရေချိုးရန် အဝတ်အစားများချွတ်လိုက်သည်....။ ရဲမင်းတို့ လင်မယားလည်း ရှိနေသည်.ဟမ်း……အဟွတ်…အဟွတ်……” နှစ်ယောက်စလုံး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီး ထွန်းလင်းက လီးကို ဆွဲထုတ်ကာ ချိုမွန်ကို အောက်သို့ ချပေးပြီး ပုဆိုးကို ကပျာကယာ ကောက်ဆွဲ ဝတ်သည်.။ အိမ်ရောက်တော့ ကားကို အိမ်ရှေ့တွင် ရပ်ပြီး ကားပေါ်မှ ဆင်းကာ အိမ်ရှေ့သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်လျင် မမရင်က တံခါးကို လာ၍ ဖွင့်ပေးနေသည်ကို အံ့သြစွာ တွေ့လိုက်ရသည် .။ ထွန်းလင်းက အိမ်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်ပြီး သံတခါးကို ပြန်ပိတ်ကာ သော့ခလောက်ကို ညှစ်၍ ပြန်ပိတ်လိုက်သည်.။ အိမ်ထဲရောက်တော့ စောစောက တံခါးကို ဖွင့်ပေးသော မမရင်ကို မတွေ့ရ.။ လီးကြီးက ပို၍ တင်းခနဲ တင်းခနဲ မာတောင်တက်လာသည်.။ ထွန်းလင်း လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အုပ်၍ ညှစ်ကြည့်လိုက်သည်.။ ဒါကြောင့် ထွန်းလင်းက “ ငါအပြင် ခဏ သွားအုံးမယ်ကွာ.။ ထွန်းလင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘယ်ရယ် မဟုတ်...။ ဒိုင်တွင် ချိုမွန်ကို တွေ့မြင်နေရရင်း သူမကို ညက လိုးခဲ့စဉ်က အားမရခဲ့မှု ၊ ပြောရင်း မပြီးခဲ့ရသေးသည့် ဝေဒနာက ဆိုးဆိုးလာပြီး သူမကို ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း စိတ်တွေက ထထနေရသဖြင့် မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်နေရမှုကြောင့် စိတ်ပြေလက်ပျောက် လျှောက်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်.။ ချိုမွန်ကလည်း သူမ၏ ထမီလေးကိ ကမန်းကတန်း ပင် ကောက်ဆွဲပြီး မဝတ်နိုင်အားပဲ အိပ်ယာထဲသို့ ပြေးဝင်သွားသည်.
“ ထူထူထဲထဲလေး ဖြစ်နေသော အမွှေးလေးများ၏ အောက်မှာပင် မမရင်၏ စောက်ဖုတ်သည် ဖောင်းကား၍ နေချေပြီ.။ ညှစ်သည်.။ သူ့လက်က စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆုပ်၍ တစ်ချက်ညှစ်လိုက်ရာက ထွန်းလင်း ကြုံး၍ ထလိက်ုသည် .ဟင်း..။ ရင်ထဲတွင် နုံးချိ၍ လာသော မမရင် ခမျာ တဖြေးဖြေး ငြိမ်ကျလာသည် ...။ ထို့နောက် ဒူးထောင်ထားသော မမရင်၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ခြေဖဝါးနှစ်ဖက် မိုးပေါ်ထောင်သွားအောင် သူမ၏ ဗိုက်ပေါ် တင်လိုက်ပြီး ဖွေးခနဲ ပေါ်လာသော တင်သားလုံးလုံးကြီးများရှိရာ ပေါင်ရင်းနှစ်ဖက်နားသို့ .။ “ အမေ့………..။ ပြီးတော့မှ မမရင်သည် ရုန်းကန်ရန် သတိရပြီး ရုန်းကန်လိုက်ပေမယ့်လည်း သန်မာလှသော ထွန်းလင်း၏ လက်နှစ်ဖက်ကြားတွင် မမရင်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ လှုပ်ပင် မလှုပ်နိုင်တော့ချေ...။ ဖြစ်ညှစ်သည်..အင့်…....။ ထွန်းလင်း ဘာမှ စဉ်းစားမနေတော့.။ ဒါကို သတိထားလိုက်မိသော ထွန်းလင်းက သူ၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဖက်ထားရာမှ ဖြုတ်၍ မမရင်၏ တင်သားဆုံကြီးကို ဆုပ်သည် ..ဟင့်အင်း….။ ထို့ပြင် သူမ၏ ဆီးစပ်အောက်ဖက် စောက်ပတ်၏ အောက်မှ ပင့်၍ ထောက်ထားသော ထွန်းလင်း၏ လီးတန်မာမာကြီးက တလှုပ်လှုပ် ရမ်းနေသော မမရင်၏ ကိယ်ုလုံးကြောင့် စောက်ပတ်အုံကြီးကို မာတောင်နေသော လီးတန်ကြီးက လိုက်၍ ပွတ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေသည်.။ ထွန်းလင်းသည် မမရင်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို စွေ့ခနဲ ပွေ့လိုက်ပြီး သူမ၏ အခန်းထဲသို့ လှမ်းဝင်လိုက်ရာမှ မမရင်ကို သူမ၏ အိပ်ယာပေါ်သို့ အသာ ပက်လက်လှန်လျက်လေး ချလိုက်ရာ ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် ဒူးလေးနှစ်လုံးထောင်လိုက်သော မမရင်ကြောင့် မမရင်၏ ထမီလေးမှာ ခါးသို့ လန်တက်သွားရလေသည် ..။ ထွန်းလင်း၏ လက်ညိုးဖျားလေးက စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းထဲသို့ အဖျားလေးမျှသာ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး သူမ၏ စောက်စေ့ကလေး ရှိမည့်နေရာကို မှန်း၍ ဖွဖွလေး ကော်တင်လိုက်သည် ...။ ထိုအခိုက်မှာပင် ထွန်းလင်း၏ လက်တစ်ဖက်က စောက်ပတ်အုံလေးကို လှမ်း၍ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ..။ “ မောင်…မောင်ထွန်းလင်း…မလုပ်…..။ မမရင်၏ ကိယ်ုလုံးကို ဆွဲဖက်၍ သူ့ရင်ခွင်ထဲ သွင်းလိုက်သည်.မလုပ်နဲ့….။ နယ်သည်.။ ပြီးတော့ ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးကြား ဖင်ကြားလေးကို ထမီပေါ်မှပင် လက်စောင်းတိုက်ပွတ်ပေးသည်...သက်ပြင်းရှည် တစ်ချက် ချလိုက်ပြီး ရေလဲပုဆိုးကို ကောက်စွပ်၍ ဝတ်လိုက်ကာ ရေချိုးရန် အောက်သို့ ဆင်းလာခဲ့သည်.။ မမရင်၏ အခန်းရှေ့သို့ ထွန်းလင်း အရောက် အခန်းတံခါးက ကျွီခနဲ ပွင့်သွားသဖြင့် ထွန်းလင်း လှမ်းလက်စ ခြေလှမ်းကို အရပ်လိုက် အထဲမှ ထွက်၍ လာသော မမရင်နှင့် လူချင်းတိုက်မိမတတ် ဖြစ်သွားသည် ....အို…အို…..။ မမရင်၏ အသက်ရှူသံတွေမှာ ပြင်းထန်လာခဲ့ရသည်.။ ထွန်းလင်း၏ နှာမှုတ်သံက တရှူးရှူး ဖြစ်နေသည်.။ မမရင်က အံ့သြစွာဖြင့် မော့၍ အကြည့်လိကု သူမ၏ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဆွဲယူ၍ စုပ်နမ်းလိုက်တော့ရာ အပျိုကြီး မမရင်၏ ကိုယ်လုံးလေးသည် တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး ရင်ထဲတွင် တုန်ခါသွားရလေသည် ..ဟင့်…ကျွတ်ကျွတ်……” မမရင်၏ ကိုယ်လုံးလေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားသည်.
ဟင်း……” .လေး…..ဘာ ...အ…….အ…...။ စောက်ပတ်ထဲတွင်လည်း လီးက တဝက်လောက်ဝင်ကာ တစ်နေလေတော့ မမရင်မှာ တော်တော်ပင် ခံစားရခက်လာပြီး ဖင်ကြီးတလှုပ်လှုပ်နှင့် ဖြစ်လာကာ တအင်းအင်း ဖြစ်နေလေသည် .။ ပြီးတော့ သူ့ပုဆိုးကို ခါးပုံစမှ ဖြည်ချလိုက်သည်..။ ထွန်းလင်းက အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေသော စောက်ပတ်ဝတွင် သူ၏ လီးထိပ်ကြီးကို တေ့၍ ဖိသွင်းချလိုက်သည် ....မင်း……” အမှန်တော့ ဒီအခြေအနေရောက်မှာ သိပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် မမရင်က ဂယောင်ဂတန်းနှင့် မေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်.အမလေး………နာ….။ “ ဗြစ်……ဗြစ်…“ “ အမေ့…..။ ထွန်းလင်းပြောလိုက်တာကလည်း ကြည့်အုံး…။ “ မမရင် ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကျနော့် လီးကြီးနဲ့ လိုးမလို့…” “ အို…….။ နို့သီးလေးတွေကို တစ်လုံးချင်း ပွတ်သပ်ချေမွပေးသည်.ဟင်…..ဘာ…လုပ်မလို့လဲ…..မမကို မနှိပ် စက်ပါနဲ့တော့………ဟင်း.။ မမရင်၏ အသံလေး ထွက်လာပါတော့သည်....မင်း…….။ ဒါကိုမြင်လိုက်ရသော အပျိုကြီး မမရင် တစ်ယောက် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည်..။ လီးကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင် တစ်လစ်ကြီး ထားလျက်ကပင် ထွန်းလင်းက မမရင်၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်ပေးသည်.။ ထိုအခါ ဖွံ့ထွားဆူဖြိုးသော မမရင်၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးက ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီး ထွက်ပေါ်လာသည် .....။ ဒါကိုက သူမ၏ အမှား.။ ငေါက်ခနဲ ထွက်လာသော တန်းမတ်နေသည့် လီးတန်ကြီးက တရမ်းရမ်း ဖြစ်နေသည်..။ မကြာလိုက်ပါချေ.” မမရင် မျက်လုံးလေးအစုံကို မှိတ်ချလိုက်သည်..နာတယ်…အင်း….။ “ မင်း….ဒူးထောက်ချလိုက်သည်.။ ထွန်းလင်းက လီးကို ဆက်၍ မသွင်းသေးပဲ စောက်ခေါင်းထဲတွင် တစ်လစ်ကြီး ထားလိုက်ပြီး မမရင်၏ အင်္ကျီကျယ်သီးတွေကို ဖြေးဖြေးချင်း ဇိမ်ဆွဲ၍ ဖြုတ်ကာနေလေတော့ရာ ကာမဆိပ်များ တက်နေပြီဖြစ်သော မမရင်က စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပဲ သူမ၏ အင်္ကျီကိုသာမက ဘော်လီအင်္ကျီကိုပါ အလျင်အမြန် ချွတ်ပေးလိုက်လေသည်.အင်း………” လီးကြီးက စောက်ရည်တွေ စိုစွတ်နေသော စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဗြုန်းဆို တဝက်လောက် နစ်ဝင်သွားသည်.။ “ မောင်……မောင်..
အား…..ဘာလုပ်ရမှာ လဲ….ဟင့်….လိုးတော့ ကွာ…….ဟင်း….ရှင်းရှင်း ပြောစမ်းပါ……” ထွန်းလင်းက စကားပြောလျက်ကပင် မမရင်၏ နို့တွေကို ဖြစ်ညှစ်ဆွဲနယ်နေသည် .။ “ ဗြစ်……...အင်း……အ…” အသံလေးများ မြည်တမ်းကာ ခံစားနေရှာပါတော့သည်.မပြောရင်.......။ ထို့နောက်တွင်တော့ ထွန်းလင်းသည် မမရင်၏ နို့ကြီးတွေကို စုံကိုင်ကာ မက်မက်မောမောကြီးပင် လိုးပါတော့သည်.အား…အ…အင့်……..အ…အမေ့….ဒုတ်…….” လိုး…ဆိုသော စကားလုံးကို တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ပြီး မျက်နှာလေးကို တစ်ဖက်သို့ စောင်းလှည့်ချလိုက်သည်..” မမရင်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ မြောက်ခနဲ ဖြစ်၍ သွားရသည်.မင်းကလဲ ကွာ…ဟိုဥစ္စာလေ………..။ မမရင်၏ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တုန်ရင်ရင် ဖြစ်လာပြီ.ဒီတိုင်းကြီး ကြာနေလိမ့်မယ်…” “ ကျွတ်….ဗြစ်………ဖောက်….။ အားကြိုးမာန်တက် ဆောင့်၍နေသော ထွန်းလင်း၏ လီးကြီးက မမရင်၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဆောင့်ဆောင့်ဝင်ကာ ရင်ခေါင်းထဲထိတိုင် ရောက်၍ သွားရသလို ခံစားနေရသည် ...” “ ဟို…ဟိုလေ…လုပ်မှာ လုပ်တော့လေ……ကွယ်….အမလေး.“ ဒါဆို….” “ ဘာလုပ်ရမှာလဲ…မမရင်ရ..။ ထွန်းလင်းက လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်၍ ကျန်နေသော လီးကြီးတဝက်ကို တခါတည်း ဖိဆောင့် သွင်းချလိုက်သည်..။ ထိုအချိန်မှာပင် လီးတန်ကြီး တစ်ချောင်းလုံး ပူ၍ .။ ဒရကြမ်း ထွက်၍နေသော သူမစောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်တွေကြောင့် လီးဝင်လီးထွက်သံများမှာ တစထက် တစ ခပ်စိပ်စိပ် အသံလေးများ မြည်ထွက်နေပါသည်.” “ အ….။ “ ပြောလေ…မမရင်….။ နှေးလိုက် ၊ မြန်လာလိုက် ၊ အားပြင်းပြင်းလေး ဆောင့်လိုက် ၊ အားလျှော့၍ ဆောင့်လိုက်ဖြင့် အသွင်အမျုိးမျိုး ပြောင်း၍ ဆောင့်လိုးနေတော့ရာ မမရင်ခမျာ သူမ လက်ကလေးများနှင့် ထွန်းလင်း၏ လက်မောင်းကြီးများကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း … “ ဟင်း…...လေး……နာတယ်…ကွာ…....
“ အ…မလေး….net) မှကူးယူပြီး PDF ဖိုင်ဖန်တီးပေးလိုက်ပါသည်။ ဒေါက်တာချက်ကြီး ************************************************************************* ( http://achittatkatho.။ ပြီးပါပြီ…။ ဖတ်မှတ်သိမ်းဆည်းရ လွယ်ကူအောင် ( http://achittatkatho.ကျင်တက်လာပြီး အားမလို အားမရ ဖြစ်လာသော ထွန်းလင်းသည် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အားအင်များကို ညှစ်ထုတ်ကာ အံကြိတ်၍ ၁၅ ချက်ခန့် ဆောင့်၍ လိုးအပြီးတွင်တော့….အိုး……အိုး….မောင်…….net) အချစ်တက္ကသိုလ် .လေး……ကောင်း…ကောင်း…တယ်….” ဟု မမရင်ထံမှ အထိတ်တလန့်သံလေးထွက်ပေါ်လာပြီး သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေး ကော့ပျံတက်သွားသည့် ခဏမှာပင် ထွန်းလင်းသည်လည်း ဟင်းခနဲ သက်ပြင်းချရင်း က သူ၏ ကိုယလ်ုံးကြီးကို မမရင် ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပါလေတော့သည်...မောင်….
Documents Similar To ASone-Hti
Ta Chat Htae Nae
Chit Ya Part Ha Woo
Bar Set Lote Ma Tone
Boy Love part 1
A Mite Mhaung Sayar Gyi Part 2
125315737 Kya We Yoke Kalay
All Under Wear
Kyan Ma Nout Htat
More From Thazin Moe
Mg Hla Story
Htu San TadaMyawe( Tatkayatkyi )
Sone Lal Nwar
Feeling Ei Ma
Nu Htwar Gyee Moet